EASEUS ဒေတာများကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ခြင်း၊ အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဒေတာဆယ်တင်ရေး WIZARD 2020! - စပွန်ဆာ
EaseUS ဒေတာများကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ခြင်း၊ အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဒေတာဆယ်တင်ရေး Wizard 2020!
မတော်တဆဖျက်မိခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခြင်း၊ မမျှော်လင့်ဘဲရပ်တန့်ခြင်း၊ system crash သို့မဟုတ် hard drive ပျက်ကွက်ခြင်းတို့မှအရေးကြီးသောဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်အခမဲ့ Windows Data recovery software ကိုရှာဖွေနေပါသလား။ အရေးကြီးသောအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဒေတာပြန်လည်ဆယ်တင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့တွေ့ပြီ EaseUS ဒေတာများဆယ်တင်ရေး Wizard ကို အပြည့်အဝ featured နှင့်တစ်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ် အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဒေတာပြန်လည်နာလန်ထူ software ကို ၎င်းသည်မတော်တဆဖျက်မိသည့်ဖိုင်များနှင့်ပရိုဂရမ်များမှဖျက်ပစ်လိုက်သောဖိုင်များကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည်။ ၎င်းကို mounting မဟုတ်သော၊ ကုန်ကြမ်းသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်သောအခန်းကန့်များကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
မာတိကာ ပြ ၁ EaseUS Data Recovery Wizard အကြောင်း နှစ် EaseUs Data Recovery Wizard ရဲ့ထူးခြားချက်များ ၂.၁ EaseUS Data Recovery အခမဲ့ Vs. Paid ဗားရှင်း ၂.၂ ဗားရှင်း 12.0 အတွက်အသစ်ကဘာလဲ ၂.၃ Easeus Data Recovery ကို အသုံးပြု၍ ပျောက်သော Data ကိုပြန်လည်ရယူပါ ၂.၄ နောက်ဆုံးစကား
နှင့် EaseUS ဒေတာများကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဆော့ဝဲလ်အနေဖြင့်ပြင်ပနှင့်အတွင်းပိုင်း hard drive များ၊ iOS ထုတ်ကုန်များ၊ တေးဂီတဖွင့်စက်၊ မှတ်ဉာဏ်ကဒ်များ၊ USB ကိရိယာများနှင့်အခြားအရာမှပျောက်သောအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများ (အိုင်တီအုပ်ချုပ်သူများ) သည်ဤဆော့ဖ်ဝဲကို RAID နှင့်ဆာဗာများသိုလှောင်ရာမှဒေတာပြန်လည်ရယူရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
EaseUS Data Recovery Wizard အကြောင်း
EaseUS Data Recovery Wizard ဟာအခမဲ့ဖြစ်ပြီးဒေတာဆယ်တင်ရေးပရိုဂရမ်တခုဖြစ်ပြီးအတွင်းနှင့်ပြင်ပ hard drive များမှဖိုင်များကိုရှာဖွေပြီးအသုံးဝင်သောအခြေအနေသို့ပြန်လည်ရယူရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် Data Recovery Application သည်အကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။ Formatting၊ partition loss, OS crash, virus attack နှင့်အခြား data ဆုံးရှုံးမှုကိစ္စရပ်များမှပျောက်ဆုံးသော data များကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည်။ အထူးသဖြင့် WannaCry နှင့် Petya ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကဲ့သို့သော ransomware ဖြင့်စာဝှက်ထားသောဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ကူညီသည်။
EaseUs Data Recovery Wizard ရဲ့ထူးခြားချက်များ
ရှင်းလင်းသောညွှန်ကြားချက်များနှင့်ရှင်းလင်းသောညွှန်ကြားချက်များဖြင့်ပရိုဂရမ်သည်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ လွယ်ကူသောအဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ ဆော့ဝဲလ်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖွင့်ပါ။ ထို့နောက်သင်ပျောက်ဆုံးသွားသောနေရာတွင်စက်ကိုစကင်ဖတ်ပြီးအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူပါ။
၎င်းကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်စေ၊ မတော်တဆဖြစ်စေဖြစ်စေပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကိုပြန်လည်ဆယ်တင်တဲ့ Mac နဲ့ Windows operating system တွေမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်။ သင်သည်ဤဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကို သုံး၍ ကုန်ကြမ်းများ၊ ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်သိုမဟုတ်သောဖိုင်များကိုရယူရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အခြေအနေအားလုံးနီးပါးမှပျောက်ဆုံးသွားသောအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူပါ။ EaseUS မှအခမဲ့ဒေတာဆယ်တင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲဖြင့်သင်ရုတ်တရက်ဖျက်ခြင်း၊ ပုံစံချခြင်း၊ hard drive အဂတိလိုက်စားမှု၊ ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်မှုအထူးသဖြင့် ransomware / malware တိုက်ခိုက်ခြင်းစနစ်ပြိုကျခြင်း၊
၎င်းသည်ဖိုင်အမျိုးအစားအမြောက်အမြားကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးသိုလှောင်ရေးပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ Recovery Wizard သည်ခေတ်မီဖိုင်စနစ်အားလုံးနီးပါးကို FAT (FAT12, FAT16, FAT32), exFAT, NTFS, NTFS5, ext2, ext3, HFS + နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
လုံခြုံသောဖိုင်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းပျောက်ဆုံးထားသော (သို့) ဖျက်လိုက်သည့်ဖိုင်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ တေးဂီတ၊ အသံ၊ အီးမေးလ်များစသည်တို့ကို hard drive၊ မှတ်ဉာဏ်ကဒ်၊ USB၊ ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာ၊
စာရွက်စာတမ်းများ - Word၊ Excel၊ PowerPoint၊ PDF၊ Txt နှင့်အခြားအရာများ
ပုံများ - ရုပ်ပုံချဲ့ထွင်မှုများအားလုံးနီးပါးတွင် JPEG, PNG, RAW, Photoshop, Illustrator တို့ပါ ၀ င်သည်
အသံ - MP3, WAV, AIFF, AAC, Ogg
ဗီဒီယိုများ - MPEG-4, QuickTime, AVI, WMV
မော်ကွန်းတိုက်: Zip, Gzip, RAR, Stuffit
The Deep Scan mode သိုလှောင်မှုမီဒီယာကို format လုပ်၍ မရနိုင်လျှင်ပင်ဒေတာပြန်လည်နာလန်ထူရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်။ ယင်း ခေတ္တစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းအင်္ဂါရပ် ဒေတာအမြောက်အမြားကိုပြန်လည်ဆယ်ယူပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်စတင်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
Easus Data Recovery သည်ဖိုင်တစ်ခုကိုပြန်လည်မရယူမီကြိုတင်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ရရှိစေရန်နှင့်အချက်အလက်ပြန်လည်ရရှိသောရလဒ်များကိုသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။
၎င်းဆော့ဖ်ဝဲသည်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ထိုကဲ့သို့သောရှုထောင့်အားလုံးသည်၎င်းကိုပညာရှင်များအကြားအကောင်းဆုံးဒေတာဆယ်တင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
EaseUS Data Recovery အခမဲ့ Vs. Paid ဗားရှင်း
အခမဲ့ဗားရှင်းသည်ဒေတာပြန်လည်သိမ်းဆည်းရာတွင် 2GB သာခွင့်ပြုသည် Pro ဗားရှင်းသည် ၆၉.၉၅ ဒေါ်လာဖြင့်အကန့်အသတ်မရှိပြန်လည်နာလန်ထူသည် ။ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားသောဖိုင်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည် (သို့မဟုတ်အထူးသဖြင့် 2GB ထက်နည်းသောဖိုင်များ) သည်သုံးစွဲသူများသည်အခမဲ့ဗားရှင်းကို download လုပ်၍ အလုပ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်နိုင်သည်။ 2GB ထက်ပိုသောဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူလိုသူများအတွက် (ဖိုင်အရွယ်အစားအကန့်အသတ်မရှိသည့်) အကန့်အသတ်မရှိပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်စွမ်းရည်များအပါအ ၀ င်အဆင့်မြှင့်ထားသောဗားရှင်း၏အင်္ဂါရပ်များကိုပြန်လည်ရယူလိုလျှင်၊ သက်တမ်းတစ်သက်တာအတွက်နည်းပညာအထောက်အပံ့ တိုတောင်းသောစမ်းသပ်မှု)၊ အခမဲ့သက်တမ်းတိုးခြင်း (အသုံးပြုသူနှစ်သက်သည့်အခါတိုင်းအကန့်အသတ်မရှိသောဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ခွင့်ပြုသည်) နှင့်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဗားရှင်းအတွက်၊ စတင်ခြင်းမပြုရသေးသောစနစ်မှဖိုင်များကိုပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်စွမ်း , တတ်နိုင်သော, တစ်ကြိမ်အခကြေးငွေကောက်ခံလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်လုံးဝပျက်သွားပြီးသင်၏ operating system ကို load မလုပ်နိုင်သောကွန်ပျူတာရှိပါက EaseUS Data Recovery တွင်သင်မဟုတ်ရင်မရနိုင်သောဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူရန် bootable media မှစတင်နိုင်သောဗားရှင်းတစ်ခု (Pro + WinPE) ရှိသည်။ စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်ပြုလုပ်ထားသောနည်းပညာဗားရှင်းလည်းရှိပါသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်ဖောက်သည်များ၏အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ကူညီနိုင်သည်။ ဗားရှင်းအားလုံးတွင် developer မှတစ်သက်တာ update များနှင့်အဆင့်မြှင့်မှုများပါရှိသည်။
ဗားရှင်း 12.0 အတွက်အသစ်ကဘာလဲ
အဆိုပါ interaction ကများအတွက်အသေးစား optimization ။
Easeus Data Recovery ကို အသုံးပြု၍ ပျောက်သော Data ကိုပြန်လည်ရယူပါ
ပထမဆုံး download လုပ်ပါ EaseUs ဒေတာများဆယ်တင်ရေး wizard တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှအခမဲ့လမ်းကြောင်း။ ပြီးရင်ဒီ application ကို install လုပ်ပြီးညာဘက်ကလစ်ကိုနှိပ်ပြီး setup administrator ကိုဖွင့်ပါ။ installation လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်းပြီးအလွန်လွယ်ကူသည်။ ပထမ ဦး စားပေးသောဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပြီး ok နှင့်နောက်တစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်လိုင်စင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုလက်ခံပါ။ ထို့နောက် installation လမ်းကြောင်းရွေးချယ်ပါ Next ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ PC ပေါ်တွင် application ကိုအပြည့်အဝထည့်သွင်းရန်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။
EaseUs Data Recovery wizard ကိုအခမဲ့ကူးယူပါ
EaseUs Data Recovery Wizard ကို Install လုပ်ပါ
EaseUs Data Recovery Wizard လိုင်စင်သဘောတူညီချက်
EaseUs ဒေတာများဆယ်တင်ရေး Wizard တပ်ဆင်ခြင်း
ယခု application ကိုဖွင့ ်၍ သင်ပျောက်ဆုံးသွားသောဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူလိုသည့်နေရာမှအခန်းကန့်ကိုရွေးပါ။ ဥပမာ Ex: ကျွန်ုပ်သည် E drive ကိုရွေးသည်၊ သို့မဟုတ်သင်မည်သည့်လမ်းကြောင်းကိုမဆို သတ်မှတ်၍ Scan ကိုနှိပ်ပါ။
Recovery Wizard သည်သိမ်းဆည်းထားသည့်ဖိုင်တွဲများ၌မရှိသောမည်သည့်ဒေတာကိုမဆိုရှာဖွေရန်သိုလှောင် drives များကိုစစ်ဆေးသည်။ ဖိုင်များမရှိလျှင်၎င်းသည်နက်ရှိုင်းသောစကင်ကိုအလိုအလျောက်စတင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီးပိုမိုမြန်ဆန်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုပြီးစီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပြီးစီးသောဘား၏ဘေးတွင် Export ခလုတ်တစ်ခုရှိပြီးသင့်အား scan ဖတ်သည့်ရလဒ်များကိုသိမ်းဆည်းရန်အတွက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
Preview ခလုတ်သည်သင်ဖိုင်များကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းမေးခွန်းသည်သင်ရှာဖွေနေသည့်ဖိုင်သည်မပျက်မပျက်ဖြစ်နေသည်ကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးသည်နှင့်အကြောင်းအရာကိုဖိုင်သစ်၊ ဖိုင်အမျိုးအစား (ဂရပ်ဖစ်၊ အသံ၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဗွီဒီယို၊ အီးမေးလ်၊ အခြား) နှင့်ဖိုင်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ရှာဖွေခြင်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင် extension တစ်ခု (.txt, .jpg) ကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်သင်တစ် ဦး တိကျတဲ့ဖိုင်အမျိုးအစားကိုရှာဖွေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဖိုင်များကိုပြန်ယူရန်သင်သိမ်းဆည်းလိုသည့်ဖိုင်များ၊ ဖိုင်တွဲများသို့မဟုတ်အခန်းကန့်များအားလုံး၏ဘေးပတ်လည်ရှိရင်ပြင်များကိုအမှတ်အသားပြုပြီးထင်ရှားစွာပြသထားသည့် Recover ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖိုင်များကိုသင်သိမ်းဆည်းလိုသည့်နေရာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဖြည့်စွက်ရန် ၁.၅ GB ဒေတာပြန်လည်ဆယ်တင်ရန် EaseUS ဒေတာပြန်လည်ဆယ်တင်ရေး wizard သည်
ပျောက်ဆုံးသောဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူခြင်းကိုစကင်ဖတ်ရန် EaseUS ဒေတာပြန်လည်ဆယ်တင်ရေး wizard
Recover ကိုရှာဖွေနေသည့် Data ကိုရွေးချယ်ပါ
၎င်းသည်အခမဲ့ရရှိနိုင်သောအခမဲ့ Data Recovery software သည်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များ၊ optical drives များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်ပြေသောဆာဗာများမှဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူရန်ခွင့်ပြုထားပြီးမည်သည့်သုံးစွဲသူမဆိုနားလည်နိုင်သောသုံးစွဲနိုင်သည့်အလိုအလျောက် interface ကိုပေးသည်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းသည်အချိန်ကုန်သက်သာစေသည်။ မလိုအပ်သောအဆင့်များကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်အသစ်စက်စက်အသုံးပြုသူများကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ရလဒ်ကောင်းများကိုရရှိစေရန်အတွက် data recovery သည်ခလုတ်အနည်းငယ်နှိပ်သကဲ့သို့လွယ်ကူစေသည်။ ဤကိရိယာကိုသင်ကြိုးစားပြီးပါကအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအပေါ်အတွေ့အကြုံနှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုမျှဝေပါ။
Google Chrome အဘယ်သူမျှမအသံပြင်ဆင်ချက်
ပရင်တာထည့်သွင်းဖွင့ ်၍ မရပါ ဒေသခံပုံနှိပ် spooler ဝန်ဆောင်မှု running မဟုတ်ပါဘူး
google chrome သည် windows7ကိုရပ်တန့်လိုက်သည်
windows 10 update microphone သည်အလုပ်မလုပ်ပါ